Accueil Ny Mpitandrina Toriteny Toriteny 10/12/2017
"Amboary ny làlan'ny Tompo" (Mar 1 :1-8)
Ny teny anankitelo novakiana amin’izao alahady faharoan’ny advento izao dia manasa antsika mba hanamboatra ny fahatongavan’ny Tompo. Tsindrian’Isaia tsara “ny handravonana (aplanir) ny lalana, hanatotofana izay lavadavaka, ny hanitsiana izay miolakolaka( tortueux)”, Petera sy Jaona mpanao batisa kosa dia nanampy fa zava-dehibe ny “fiovam-pontsika” (il est important de convertir notre coeur). Tsy maintsy hatsaraina ny tranontsika mba handraisana ny Tompo.
Tsy nandeha tany an’efitra mba hipetraka amin’ny mangingina I Jaona. Niaina ny fiovam-po lalina izy tany ka nanasa ny hafa hanao toy izany koa. Fantany fa ny fifandraisana amin’Andriamanitra dia afaka manova ny fiainantsika ary manome antsika indray fifaliana sy fanantenana.
Ny “tany efitra” dia afaka mandray endrika samihafa: toerana mihataka izay ahafahana mihaino ny feon’ny fieritreretany, ny fiangonana na ny fikambanana kristiana izay manasa antsika ho amin’ny fieritreretana (recueillement) sy ny fifampizarana, “groupe de reflexion” izay hanorenana miaraka amin’ny hafa ny fijerintsika izao tontolo izao, tranokalam-pifandraisana (site internet) izay manokatra sehatra vaovao, ka mampifandray antsika amin’ireo mpikaro-pahalalana, asa hainkanto ( une oeuvre d’art) na sombi-mozika izay mitondra antsika handeha lavitra hisaintsaina ny ao anatintsika, etc…
Ny efitra dia toerana izay ahafahantsika mampihena ny hamafin’ ny tabataba mifanjevo izay mamely antsika avy etsy avy eroa. Ny efitra dia ny tontolo iainana izay ahafahana mihaino, miambina, ary miandry.
Tsy izay rehetra fiandrasana anefa dia mahasoa ary ny sasany aza tsy misy ilana azy akory. Tamin’ny filalaovana ilay piesy nà teatra n’i Samuel Becquet dia toy izao no niseho: Waiting for Godot (Eo am-piandrasana an’I Godot), dia nisy ireo olona nipetraka tamin’ny tany ary niresaka nandritra ny filalaovana ilay piesy, miandry ny fihavian’I Godot. Nomarihin’izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fahatongavan’I Godot. Efa tokony hifarana ilay piesy, nisy nidtra avy any ivelany nilaza fa tonga ao amin’ny tanàna hafa I Godot. Nisy iray tamin’ireo mpilalao no nilaza hoe: andao ho tadiavina any…kanefa tsy nisy nihetsika izy rehetra. Nijanona nitoetra teo ireo ary nanohy ny resany foana mandra-pihidin’ny rideau milaza ny fiafaran’ny tantara. Izany no karazana fiandrasana tsy mitondra vokany, feno rediredy tsy misy dikany, ary tsy misy ilaina azy, hoy Samuel Becquet.
Fa misy kosa karazana fiandrasana mahatonga ny olona handray andraikitra hikarakara ka miteraka faharisihana hanao, ary hanovana plana mihitsy, fanantenana manokatra ny ho avy, sy fifaliana mifampita. Ohatra amin’izany ny fiandrasan’ny ray aman-dreny mikarakara ny hahaterahan’ny zanany. Lokoina ny efitra hisy ilay zaza, manao izay hahazona berceau, fandriana kely, ravahana ny rindrina, vidiana izay akanjo ho an’ilay zaza vao hateraka, mifaly miaraka amin’ny ray aman-dreny sy ny namana. Atao daholo izay azo atao mba hahatonga ilay fiterahana ho ankalazaina amin’ny fifaliana. Izany no modelinà-fiandrasana ambaran’ny filazantsara.
Ny krismasy dia fety lehiben’ny taona. Tsy maintsy omanina tsara izany. Fetin’ny fahatongavan’Andriamanitra ety amintsika izany. “Amboary ny lalan’ny Tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany”. Ny tsy fisian’izany ezaka “manamboatra ny lalan’I Jehovah””, ry Havana, dia famelana ny tenantsika ho voasinton’ny ravaka marevaky ny tranombarotra ihany, fa voatakona tanteraka ny fiavian’ny Tompo. Araka ny nambaran’I Jaona mpanao batisa dia ho avy ao amintsika ny Tompo raha manomana ny làlany isika. Sarotra ihany ny manamboatra lalana, aty amintsika tanin’ny hatsika, misy glace sy la neige, mitaky asa betsaka izany. Mandritra ny été dia mitombo ny programa fanamboarana eto amin’ny tany sy ny fanjakana, mba hahatonga ny lalana ho vita tsara mialohan’ny fahatongavan’ny la neige izay mandrakotra azy.
Eo amin’ny làlan’ny fiainantsika, ry Havana, mampitombo ny lavaka, ny dongodongona (bosses), lavadavak’arabe (nid des poules) ny fotoana lalovantsika. Misy ny fiolahana mafy ahitsy, misy ny fikitoantoanana misoritsoritra. Ilaina ny fanitsiana, fandravonana, fanamboarana, fanazavana, mandrakotra “goudrons”. Asaina isika androany hijery ny fiainantsika, mba ahitana izay tokony hatsaraina na hamboarina ho vaovao mihitsy, mba hahatonga ny Tompo ho ao amintsika. Inona no fiovana mety hataontsika mba hisian’ny tena firahalahiana, tena kristiana, tena maha-olona?
Fotoam-piandrasana, ry Havana, ny advento, fiomanana ho amin’ny fiovam-po . Izany dia fitodihan-damosina ny lasa ka mijery ny ankehitriny sy ny ho avy, fanovana ny fomba fijery mba hahatongavana amin’ny tena fahatsarana. Asan’ny fo izany ary fanasana antsika hanamboatra ny lalan’ny Tompo. Amena!
Toriteny alahady 10 desambra 2017
"Préparez le chemin du Seigneur!"(Mc 1 :1-8)
Les trois lectures de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invitent à bien nous préparer à la venue du Seigneur. Isaïe souligne le besoin «d’aplanir le chemin, de combler les ravins, de redresser les passages tortueux», Pierre et Jean Baptiste ajoutent qu’il est important de «convertir notre cœur». Il nous faut «embellir» notre maison pour bien accueillir le Seigneur.
Le désert peut prendre des formes différentes : un lieu retiré où il devient possible d’entendre ses voix intérieures, une église et sa communauté chrétienne qui nous invitent au recueillement et au partage, un groupe de réflexion où l’on construit avec d’autres notre vision du monde, un site Internet qui ouvre des nouveaux horizons et nous met en contact avec d’autres chercheurs de sens, une œuvre d’art ou une pièce musicale qui nous amène à aller plus loin au dedans de nous-mêmes, etc.
Prédication dimanche 10 décembre 2017